Policy papers | Oxfam in Myanmar
Executive summary In recent years, Myanmar has been experiencing profound political, economic and social changes. Wide-ranging policy reforms that began in 2011 includedatransition to greater civilian rule, more press freedoms and changes to foreign investment laws and currency exchange rates,...
အနှစ်ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း သိသာထင်ရှားသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အပြောင်း အလဲများကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သော ကျယ်ပြန့်သည့် မူဝါဒရေးရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် ပိုမိုအားကောင်းသော အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း၊...
The Durable Peace Programme (DPP) seeks to achieve lasting and equitable peace and sustainable development in Myanmar, especially in Kachin and northern Shan. It does so throughawide range of activities, from support for durable solutions for Internally Displaced Persons (IDPs), diversification...